I-Star Tollman yoKhenketho eNtsha yokuLwa kweMfazwe ineCancer kwi-91
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » abantu » I-Star Tollman yoKhenketho eNtsha yokuLwa kweMfazwe ineCancer kwi-91
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseFransi ezaphulayo • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • abantu • Iindaba zaseMzantsi Afrika eziQalileyo • Tourism • komzila Ngoku
UStanley S. Tollman
Umboni wecandelo lezokhenketho kwihlabathi liphela, usomashishini, kunye nophilanthropist uStanley S. Tollman, umseki kunye nosihlalo we-Travel Corporation (TTC), iqela eliphumelele kakhulu kwilizwe jikelele eliquka ngaphezulu kwe-40 yeebhaso eziwine amabhaso kubandakanya iTrafalgar, iiholide zeInsight, iiholide zeContiki, iRed Carnation Iihotele, kunye neUniworld Boutique River Cruises, kunye novulindlela wentshukumo yokuhamba ngokuzinzileyo engenzi nzuzo kwiTreadRight Foundation, usweleke emva kwedabi elinomhlaza. Wayeneminyaka engama-91.
Ebhiyozelwa njengomyili wezinto zeli shishini lokuhamba, uTollman wenza ukuba amashumi ezigidi afumanise umhlaba ngeephothifoliyo yeemveliso zohambo.
Unokukhunjulwa ngcono njengosolusapho othandekayo kunye negosa lekhulu leminyaka ubudala, elinabanikazi losapho kunye nokuqhuba ishishini.
Namhlanje i-TTC inabasebenzi abangaphezu kwe-10,000, abazisa iindwendwe ezingenakuthelekiswa nanto kwiindwendwe kumazwe angama-70 kwihlabathi liphela.
Unyana wabafuduki abangamaLithuania abangamaJuda abasindileyo besongela ubomi be-anti-Semitism eRashiya, UStanley Tollman Wazalelwa kwilali encinci yoMzantsi Afrika yokuloba ePaternoster eNtshona Koloni apho abazali bakhe bebeqhuba ihotele ekumgangatho ophantsi enezindlu zangasese zangaphandle nalapho uTollman oselula ahambahamba engenazihlangu ngelixa efumana ubushushu kunye nokuziphatha kosapho oluzinikele ekubukeni iindwendwe.
Utata wakhe uSolomon Tollman ubize inzala yokhathalelo lwabathengi enomdla 'eqhutywa yinkonzo' kwaye le ndlela, ecaleni kokufuna ukugqwesa ngokungagungqiyo, iya kuba luphawu lomsebenzi wobomi bukaStanley Tollman, isifundo kunye nefilosofi engapheliyo ayigcinileyo kumashumi eminyaka yokubuka iindwendwe ikhondo lomsebenzi kwaye wafaka kwizizukulwana zabantu baseTollmans abaqhubeka nokulandela ekhondweni lakhe.
Unyana waseAfrika ubeka umbono wakhe kwihlabathi
Ngo-1954, uStanley Tollman watshata noBeatrice Lurie, eqala ibali elingapheliyo lothando kunye nentsebenziswano. Ekwabelaneni ngomnqweno wokubuk 'iindwendwe okhethekileyo, esi sibini sitshatileyo sisebenzise imali yabo yomtshato ukuthenga ipropathi yabo yokuqala- ihotele iNugget eRhawutini.
UTollman usebenze ngokungakhathali, eqhutywa kukuqhubeka kwakhe nokufuna ukugqibelela kunye nendlala yokwenza ifuthe kuyo Mzantsi Afrika kwaye, ukuba kunokwenzeka, nehlabathi. Ithuba lafika ngo-1955 ngotyalo-mali lwesibini lukaTollman, yiHyde Park Hotel, ihotele yokutyela e-boutique eMzantsi Afrika neyasungula igama likaTollman njengophawu olugqwesileyo nolwenza ukuba eli hotele lisebatsha libe nodumo.
E-Hyde Park, uStanley noBea basebenze ngokubambisana, kunye noStanley ojongene nendlu ngelixa u-Bea eqhuba emva kweembononongo, waba yintloko yabapheki beentombi eMzantsi Afrika ngelo xesha. Ingcinga yabo kwigumbi lokutyikitya lokutyikitya ehotele, irestyu yokutyela yaseColony yacacisa kwakhona ubungangamsha kwaye kwangoko yaba yimincili. UTollman uhambe ilizwe ezisa imidlalo ye-cabaret yamazwe aphesheya eza kudlala apha, ephakamisa ukubonakaliswa koMzantsi Afrika kubazobi bamanye amazwe kumdaniso nomculo. Kungowokuqala ukwamkela amagcisa awaziwayo kunye nosaziwayo abanjengoMarlene Dietrich kunye noMaurice Chevalier kunye nabasebenzi beefilimu - kubandakanya ifilimu eyimbali kaStanley Baker ethi “Zulu” edlala indawo kaMichael Caine - eMzantsi Afrika ngeminyaka yoo-1950 kunye neye-60.
Idumela likaTollman ngokugqwesa lakhula ngokwaziswa kweTollman Towers, ihotele yokuqala eMzantsi Afrika eneenkwenkwezi ezintlanu, zonke ezihamba phambili, zilandelwa lilinge lokuqala kushishino lokuhamba ngokuthenga iTrafalgar Tours ngo-1969. Ukuhamba ngokuntywila kuguqula inkampani encinci, entsha yokuhamba iye kwelinye lawona mabhaso ahamba phambili awonga amabhaso okuhamba kwihlabathi liphela nangaphezulu kwamabhaso angama-80 ukuza kuthi ga ngoku. UTrafalgar akwandisanga kuphela ukubanjwa kukaTollman ngaphaya kweehotele, kodwa nakwiimarike zohambo zehlabathi, evula indlela yokwenziwa kweQumrhu lokuHamba njengoko kunjalo nanamhlanje.
Ukujonga uTollman njengomdala wehlabathi kunye nokuhlonitshwa, uSir Geoffrey Kent, uMseki, uSihlalo we-Co-CEO kunye nenkampani ye-Luxury Travel Abercrombie & Kent bathi:
NguAdria Mallin uthi:
Novemba 18, 2021 kwi-11: 30
Imbeko kaLinda Hohnholz kuStanley Tollman ongasekhoyo yamenza waphila! Onjani umntu ongaqhelekanga. Okunjani ukuzinikezela kwisidima, uvelwano, ukwamkela bonke abantu xa abanye besahlula kwaye besoyisa ngenxa ye-aggrandizement yabo, kwaye yintoni igalelo kwishishini lezohambo lokutyebisa ngokunzulu amandla alo, ngenjongo yokwabelana ngobuncwane belizwi, bugcinelwe ixesha elizayo. izizukulwana, kunye nokuphucula amava okuhamba kwizigidi. Enkosi, Linda. Enkosi, Stanley Tollman.